Misaotra an’Andriamanitra lehibe isika fa afaka namita ny adidintsika tamin’ny fifidianana Ben’ny Tanàna sy Mpanolotsaina teto Antananarivo renivohitra, ka hanehoako etoana ny fisaorana sy fankasitrahana ny vahoakan’Antananarivo tonga nifidy na dia teo aza ny tsy fahatomombanana isan-karazany ; Tsapako ny fitaintainanareo sy ny alahelo satria maro taminareo no tonga teny amin’ny Biraom-pifidianana nefa tsy afaka nifidy, na dia manana kara-pifidianana satria tsy hita indray tao anaty lisi-pifidianana ;
Nisafidy ny tsy mbola haneho hevitra mikasika ny fifidianana kaominaly ny tenako, hoy i Eliace Ralaiarimanana, kandida Ben’ny tanàna tsy miankina teto Antananarivo Renivohitra. Misy ny fotoana hitenenana hoy izy, na izany aza « midika ho faharesen’ny fanjakana ny tsy fahatongavan’ny olona nifidy ireny », araka ny nambarany. « Fampiharana ny lalàna », izay no famerimberin’i Eliace Ralaiarimanana tamin’ireo adihevitra nifanaovan’ny samy kandida sy ny fanehoan-keviny rehefa nivahiny tamin’ny haino aman-jery nandritra ny fampielezan-kevitra. (Jereo Sary Tohiny)
"Leo politika ny olona ary leo ny politika maloto", hoy i Rakotoarisoa Faniry Alban na Babà Rakotoarisoa taorian'ny fifidianana kaominaly natao omaly, izay ambany dia ambany ny taham-pahavitrihan'ny mpifidy. Kandida Ben'ny tanàna teto Antananarivo renivohitra, amin'ny anaran'ny APM (Antoko Politika Madio) i Babà Rakotoarisoa.
Nisaotra ireo mpikambana MDV (Madagasikara Vaovao) tamin’ny fandraisana andraikitra sy ireo nanohana azy tamin’ny fifidianana kaominaly i Marc Ramiarinjatovo, Ben’ny tanàna teo aloha tao amin’ny Kaominina Alasora, Distrika Antananarivo Avaradrano ary kandida tamin’ny fifidianana natao omaly 27 novambra. Miarahaba an'Atoa Jimmy Randriantsoa, mpifaninana taminy ihany koa i Marc Ramiarinjatovo, « lany soa amantsara ary mirary azy hahavita soa ny asa hapetraky ny vahoaka aminy ». Kandidan’ny antoko Tiako i Madagasikara i Jimmy Randriantsoa. Lefitry ny Ben’ny tanàna nandritra ny efa-taona nitantanan’i Marc Ramiarinjatovo an’i Alasora. (Jereo sary Tohiny)
Namaly ny taratasy fangatahan’ny filohan’ny Antenimierandoholona Rivo Rakotovao, tamin’ny 5 novambra 2019, ny Fitsarana avo momba ny Lalampanorenana, raha toa ka mifanaraka na tsia amin’ny Lalampanorenana ny didim-panjakana 2019-1866 tamin’ny 25 septambra 2019 nanendrena ireo Governora. Tamin’ny fanapahana 17-HCC/D3 navoakany androany 28 novambra 2019 no nilazan’ny Fitsarana avo momba ny Lalampanorenana fa mifanaraka amin’ny Lalampanorenena ny fanendrena Governora voarakitry ny didim-panjakana 2019-1866 tamin’ny 25 septambra 2019. Vonjimaika ihany ny fanendren’ny fitondrana foibe ny rafitra mpanatanteraka eny anivon’ny Faritra, mandrampametrahana ny satan’ny vondrombahoakam-paritra ary fomba fiantso ny « lehiben’ny Faritra » fotsiny ihany ny hoe : « Governora », tsy mifanohitra amin’ny voalazan’ny Lalampanorenana. Governora miisa 11 no efa voatendry tamin’ny andiany voalohany, mety ho alohan’ny faran’ity taona ity ny fanendrena ireo ambiny.
Hifarana anio misasak’alina ny fampielezan-kevitra amin’ny fifidianana Ben’ny tanàna sy Mpanolontsaina hatao ny tontolo andron’ny alarobia 27 novambra 2019 izao. Ho an’ny kandida Ben’ny tanàna eto Antananarivo renivohitra, mitondra ny laharana faha 2 eo amin'ny bileta tokana, dia vavaka iraisam-pinoana tao amin’ny kianja mitafon’Ankorondrano no nanakatonany ny fampielezan-keviny androany tolakandro. Notetezin’ity kandidan’ny antoko Tiako i Madagasikara ity avokoa ireo Fokontany 192 eto Antananarivo Renivohitra, nihaonany sy nifampiresahany nivantana tamin’ny vahoaka. Tonga maro nameno kianja Ambohijatovo ireto farany ny sabotsy teo, nandritra ny faradoboka.